HARENA AN-DRANOMASINA : Misokatra ny fiaraha-miasa amin’ireo firenen-dehibe
Mandray andraikitra feno amin’ny fiarovana ny tombotsoa stratejika sy ekonomika ao amin’ny fari-dranomasiny i Madagasikara. 6 novembre 2019
Misy ny hetsika karakarain’ny ivon-toerana rezionaly momba ny fanangonam-baovao an-dranomasina (CRFIM) izay iarahany amin’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena sy ny fitondrana Amerikana amin’ny alalan’ny masoivohony miasa sy monina eto amintsika. Firenena maro be no mandray anjara amin’ity hetsika ity. Tanjona ny fifampizarana traikefa eo amin’ny samy mpandray anjara. Tonga teny an-toerana niatrika izany moa ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, omaly. Nambarany fa manohana an’i Madagasikara amin’ny fiarovana ny fari-dranomasiny ny Amerikana ary manome fiofanana amin’ny fanazaran-tena ataon’ny Tafika an-dranomasina Malagasy koa. Haharitra 10 andro io fanazaran-tena io ary mandritra izany no andraisan’ny Tafika Malagasy ny fahaiza-manao avy amin’ny firenen-dehibe toa an’i Amerika.
Tsy ny ety an-tanety ihany no misy dahalo sy mpandroba ny harem-pirenena fa any an-dranomasina koa dia ahitana izany, hoy ny minisitra.
Nambarany fa mila hamafisina io fiarovana ny fari-dranomasina io mba hiarovana ireo harena tsy hita pesipesenina voatahiry any anaty ranomasina any. “Betsaka ny zava-miseho any an-dranomasina any, misy ireo jiolahin-tsambo na piraty, misy koa ireo mangalatra ny harena any an-dranomasina, misy koa ireo mamoaka an-tsokosoko ny fananan’ny firenentsika ka tsy maintsy mandray andraikitra isika”, hoy ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Mila fiaraha-miasa matotra amin’ny firenena mpifanolo-bodirindrina amintsika ny famongorana izany, hoy izy, satria Nosy i Madagasikara ary manana ranomasina midadasika. Ankoatra ny firenena mifanakaiky amin’i Madagasikara nefa dia ilaina koa ny miara-miasa amin’ny firenena matanjaka toa an’i Etazonia satria izy ireo no manana fitaovana avo lenta afaka mitily izany. “Miara-miasa amin’ny Tafika samihafa isika hahafahana mifehy ny ranomasina aty amin’ny ranomasimbe Indiana sy mifehy ny ranomasina izay an’i Madagasikara manokana”, hoy koa ny nambaran’ny minisitra. “Adinodino i Madagasikara hatramin’izay saingy efa afaka mirehareha isika amin’izao fotoana izao satria efa mitodika tanteraka amin’io harena an-dranomasina io ny fitondram-panjakana. Mitodika amin’ny fijerena ny Iles Eparses sy ny harena ambanin’ny tany ary mitodika amin’ireo harena rehetra mampiavaka azy”, hoy hatrany ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard.